Ukupakisha nokuthumela: yiziphi izinhlobo ezikhona nokuthi yiziphi ezihamba phambili | Ezezimali Zomnotho
Uma unebhizinisi futhi kufanele uthumele imikhiqizo kumakhasimende, awunayo i-A noma i-B njalo. Lokho, awunanketho yokuyithumela ebhokisini noma emvilophini. Empeleni, kukhona izinhlobo eziningi zokupakisha, zombili emabhokisini naku- icala lezimvilophu. Futhi okufanayo kuya ngezinketho zokuthumela. Awukwazi ukusebenzisa i-Correos kuphela, futhi unayo izinkampani eziningi zokuhambisa ezibhekene nokuthatha ama-oda kubamukeli bazo.
Uma ungakaze ume ukucabanga ngakho ngaphambili futhi manje ufuna ukwazi ukuthi iyiphi iphakethe ongayisebenzisa, izindlela ezahlukahlukene zokuyisebenzisa, noma izinketho onazo zokuthumela imikhiqizo yakho, lapha sikhuluma ngazo zonke ngezansi. Ngakho-ke, ungabheka nokuthunyelwa njengendlela yokuzihlukanisa nomncintiswano.
1 Kungani indlela izinto ezithunyelwa ngayo zibalulekile
2 Izinhlobo zokupakisha ezinkampanini
3 Izinketho zokuthumela: yikuphi okungcono?
Kungani indlela izinto ezithunyelwa ngayo zibalulekile
Lapho umuntu ebeka i-oda online (noma nganoma iyiphi enye indlela ebandakanya ukuyithola ekhaya noma ehhovisi nge-courier noma ngeposi), siyazi ukuthi okuncane kakhulu abangakubuka ukupakisha. Kubo okubaluleke kakhulu yilokho okungaphakathi. Kodwa-ke, iqiniso ukuthi ukunakekela lowo "mbono wokuqala" owenzayo kubaluleke noma kubaluleke njengokuvikela okungaphakathi.
Ngakho-ke, lapho usebenza ngamaphakeji ahlukile, kubalulekile thola ukuthi yikuphi okufanele kakhulu ngohlobo lomkhiqizo ofuna ukuwuthumela; hhayi nje ukuvimbela ukuwohloka, kepha futhi ngoba ungakha umuzwa wemininingwane owenza umuntu aphindaphinde lapho ethenga futhi.
Kusetshenziswa amabhokisi anemibala, nelogo yenkampani, noma iribhoni elenziwe laba ngelakho (elinombala, negama lenkampani, elinemininingwane noma izithombe, njll.) Kungaba yizinketho ezisebenzayo.
Inkinga ukuthi, uma kukhulunywa ngokuthumela, sihlala sicabanga ukuthi kunezinketho ezimbili kuphela: imvilophu noma ibhokisi. Kepha empeleni, kunezinye eziningi.
Izinhlobo zokupakisha ezinkampanini
Cabanga ukuthi kufanele uthumele umkhiqizo. Into ejwayelekile ukuthi ucabanga ukuyithumela ebhokisini futhi kuphelele lapho, uma incane kakhulu, esikhundleni sebhokisi ungacabanga ngesikhwama, noma imvilophu. Noma mhlawumbe ibhokisi elincane. Emakethe yokupakisha, kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo. Ngokuya ngendaba, ungathola okulandelayo:
Ama-pallets: Yizinketho ezinkulu kakhulu ezenza kube lula ukuhambisa izimpahla ezisindayo ngenkathi zivikelekile kuzo zonke izinhlangothi.
Iziqukathi: Kuyindlela yokuthumela yokuhweba okukhulu, ngoba sikhuluma ngezinto ezinkulu ezinamandla amakhulu futhi ezisetshenziselwa ukuhambisa impahla ngomhlaba, ulwandle noma umoya.
Izikhwama: Zibiza kakhulu, futhi eziningi zazo zivame ukuza nesimbozo se-bubble ukuvikela okungaphakathi. Lezi zokugcina ziphakamisa intengo kancane kepha ngaphakathi kokufakwa, zibiza kakhulu.
Izimvilophu:Isimo sezimvilophu siyefana nalokhu okungenhla. Kunosayizi abaningi, ngobulukhuni obukhulu noma obuncane, ngokusongwa kwe-bubble ukuvikela ingaphakathi, njll. Inani layo lizungeze elezikhwama kwazise zishibhile kakhulu. Iningi lenziwe ngephepha lezisindo ezahlukene noma amakhadibhodi (aqinile noma athambile, kuya ngosayizi).
Amasaka: Amasaka makhulu kakhulu kunezikhwama noma izimvilophu, futhi yize zingenziwa nangephepha, uvame ukuzithola zenziwe ngepulasitiki noma ngendwangu. Inhloso yawo ukuvikela okungaphakathi, yingakho zakhiwe zinezendlalelo ezihlukile okuthi uma sezigcwalisiwe zavalwa.
Izikhwama sawa: Lokhu kupakisha kunesici sokuthi kugcwala umoya ocindezelekile lapho kuvaliwe, ngendlela yokuthi ivikele imikhiqizo ukuze inganyakazi nganoma yisiphi isikhathi. Uma uyivula, umoya uyaphuma futhi umkhiqizo uphelele. Kubiza kakhulu kunezikhwama ezijwayelekile, ngenxa yohlelo oluthweleyo.
Amabhokisi: Amabhokisi angumhlaba wonke. Akukhona nje kuphela ukuthi kunamabhokisi amakhadibhodi ajwayelekile owatholayo, kepha kukhona amanye anzima, amabhokisi ashisayo (amelana nokubanda noma ukushisa, amabhokisi we-modular (ukubeka elinye ngaphakathi kwelinye) ... Okushibhile kakhulu yilawo ayisisekelo, okuyizinto ezisetshenziswa kakhulu ngamabhizinisi kanye nezimvilophu nezikhwama.
Izinketho zokuthumela: yikuphi okungcono?
Lapho usuzazi izinhlobo zokupakisha, nezinketho ezishibhile ongakhetha kuzo, ukuthumela kungenye iphuzu elibalulekile okufanele ulicabangele. Ngoba alikho iPosi kuphela; nezinkampani eziposa izincwadi. Futhi ngaphakathi kwalokhu, kuningi ongakhetha kukho (hhayi kuphela okwaziwa kakhulu njengeSeur, MRW, Correos Express, Nacex, DHL, njll.) Kepha kukhona abanye abangaziwa kangako kepha lokho kungasiza kakhulu.
Ngokuvamile, okumele ucabangele ukuphela kwemikhiqizo ozoyithengisa. Uma lokhu kuzohlala kuzwelonke, okusho ukuthi, ukuthumela ezweni elifanayo, ungakhetha izinkampani ezihlanganisa wonke amadolobha futhi ezikunikeza nenani elihle; Kepha uma okuthunyelwayo kungamazwe omhlaba, kufanelekile ukusungula isivumelwano noma ukusebenzisana nenkampani ukubhekana nakho kokubili okwamazwe omhlaba kanye nokwamanye amazwe.
Yini eshibhile? Ngaphandle kokungabaza, iPosi. Khumbula ukuthi le nkampani inokukhetha ukuthi abantu abaziqashile (ikakhulukazi uma bebhaliswe ezingxenyeni ezithile ze-IAE) bangathumela imikhiqizo ngamanani aphansi kakhulu. Isibonelo, incwadi engakubiza phakathi kwama-euro ama-3 no-7, kungabiza usomabhizinisi 30-50 cents ukuyithumela. Uma futhi sifuna ukukuqinisekisa, ukukhuphuka akuphezulu kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, ngezithunywa intengo ivame ukuba ngaphezulu; Ikakhulukazi uma ekuqaleni kwebhizinisi lakho ungenayo ama-oda amaningi. Uma kukhona inani elikhulu lokuthunyelwa, inkampani inikela ngentengo engabizi kakhulu, kepha imvamisa ayifani neCorreos.
Manje, kuzimo zombili kukhona izinzuzo nezinkinga. Isibonelo, eCorreos unenkinga yokuthi, imvamisa, imikhiqizo ayifiki ngesikhathi, noma ilahlekile. Okwamanje ku Izithunywa zihlangabezana nesikhathi esinqunyiwe sokulethwa. Yize kungakhululeki ekuhluphekeni ekuthengisweni, ukuthi kulahlekile, njll.
Ukuphendula ukuthi yikuphi okungcono kulukhuni. Njengokonga kakhulu, uCorreos; njengoba kusebenza kahle, izithunywa. Okukhethwa kukho okuhle kakhulu? Nikeza ikhasimende ithuba lokuzikhethela. Ngale ndlela, yenza isinqumo ngokuya ngesikhathi sokulinda noma intengo insizakalo yokuthumela engaba nayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » izinkampani » Ukupakisha nokuthumela: yiziphi izinhlobo ezikhona futhi ezihamba phambili
Yari rodriguez kusho
Kuhle kakhulu, ngiyabonga ngolwazi.